ပြည်တော်ပြန်ခွင့်မရသေးတဲ့ ပြည်တော်ပြန်များ ~ Htet Aung Kyaw
2:42 PM Htet Aung Kyaw2comments
ခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ပြီး နားရှုတ်မသွားပါနဲ့။ ၂၈ ရက်စာ Social Visa နဲ့ အလည်သဘောသာပြန်ခွင့်ရနေ သေးတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်၊ အပြီးပြန်နေခွင့်မရသေးတဲ့အချက် ကိုဆွေးနွေးချင်လို့ ဒီလိုခေါင်းစည်းတပ်လိုက်တာပါ။
အများသိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၈ လေးလုံးအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လှုပ် ရှားခဲ့ပြီး အခြေနေအမျိုးမျိုးကြောင့် နယ်စပ်နဲ့ ပြည်ပနိုင် ငံတွေဆီရောက်သွားသူအားလုံး အမိမြေဆီပြန် လာနိုင်ပြီလို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဖိတ်ခေါ်ချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် တောခိုကျောင်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးသူအပါဝင် ပြည်ပ ရောက်နေသူတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ပြည်တော်ပြန်လေ့လာရေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၅ နှစ်ကျော်ခွဲခွာနေရတဲ့ အမိမြေဆီ မနှစ် ဇွန်လအတွင်းက ပထမ ဆုံးအကြိမ်ပြန်ရောက်ဖူးတဲ့ အ တွက် အခုဆိုရင် တနှစ်တိတိ ရှိပါပြီ။ ဒီတနှစ်တာအတွင်း ဘာတွေလေ့လာနိုင်ခဲ့သလဲ။ ဒီမိုကရေစီအင် အားစုတွေနဲ့ ဘာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သလဲ။ အစိုးရနဲ့ကော ဘာတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိ သလဲ။ ဘယ်တော့အပြီးပြန်မှာလဲဆိုပြီး မေးကြသူတွေ များလာနေသလို ဒီလိုပြန်တာဟာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ အိမ်ပြန်ခြင်းပုံစံမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး ဝေဖန်သူတွေလဲရှိလာနေပါတယ်။
''ခင်ဗျားတို့ပြန်တာက အပျော်ပြန်တာပဲဗျာ။ ဟောလီးဒေး (Holiday) ပြန်တဲ့သဘောဆိုတော့ ဘာကို များ ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာနိုင်မှာမို့လဲ။ စာအုပ်ထုတ်တာကလွဲပြီး ခင်ဗျား ဘာလုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ'' ဆိုပြီး အ ခု ချိန်ထိ ပြည်တော်မပြန်သေးတဲ့ နော်ဝေးရှိမိတ်ဆွေတဦးက ဝေဖန်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန်အများစုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ၂၅ နှစ်ကျော်ခွဲခွာနေရတဲ့ မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့ အရေးသာ အဓိကလိုဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံရေး ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အလေးထားစဉ်းစားမိရဲ့လားဆိုတာဟာ မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်။ ပြည်တော်ပြန်လည်ခွင့်ရသူအများစုဟာ ခွဲခွာနေရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံ၊ မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင် ရဟန်းခံ၊ ရှင်ပြုပွဲလုပ်၊ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ဘုရားဖူးသွား၊ အပန်းဖြေ ခရီးသွားတဲ့ပုံတွေကိုသာ သူတို့ရဲ့ Facebook မှာ အဓိက မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆို ရင်တော့ အပေါ်ကမိတ်ဆွေထောက်ပြခဲ့သလို Holiday သွားတဲ့သဘောထက်ပိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိပ် မ တွေ့ရသေးပါဘူး။
ဒါကပြည်တော်မပြန်သေးတဲ့၊ လက်ရှိအစိုးရဆီမှာ ဗီဇာသွားလျှောက်တာကိုတောင် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ်မြင်နေသေးတဲ့ ပြည်ပရှိ မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ အမြင်ပါ။ ပြည်တွင်းရှိ မိတ်ဆွေတချို့ကလဲ သွား လိုက်လာလိုက်လုပ်နေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေအပေါ် သိပ်အမြင်မကြည်ပါ။ သမ္မတကိုယ်တိုင်က ဖိတ် ခေါ်ထားတာတောင် ဒီလူတွေက ဘာကြောင့်အပြီးပြန်မလာသေးတာလဲ။ နိုင်ငံခြားမှာအနေကြာသွား လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မနေချင်တော့တာလား။ တိုင်းပြည်အတွက် တာဝန်ပြန်ထမ်းဖို့ ဒီလူတွေမှာ စိတ်ကူး မရှိတော့ဘူးလား ဆိုပြီး ဝေဖန်သံတချို့ကို ကျနော်ကြားခဲ့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိဆိုသလို ပြည်တော်ပြန်တွေရဲ့ ဒုက္ခကို ပြည်တော်ပြန်တွေ အသိဆုံးပါ။ ကျနော် ရဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်ဟာ Holiday သဘောသက်သက်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေနေကို လေ့လာပြီး နေလို့ရရင် ရက်ရှည်နေထိုင်ဖို့၊ အဲဒီထက် ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အမြဲတန်းပြန်နေဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေနေက ကျနော်တို့ထင်ထားသလို၊ အများကထင်ထားသလို မဟုတ်သေးပါ။ သမ္မတနဲ့ အဖွဲ့က တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ပါးစပ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တာသာဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ပြန်လာရင် ဘယ်လို လက်ခံမယ်၊ ဘယ်လိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ် ဘာမှမရှိပါ။ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ရဲ့ စကားတလုံးဟာ သမ္မတအိုဘားမားရဲ့စကားတလုံးလိုပဲ လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါလိမ့် မယ်လို့ ပုံသေတွက်ထားမိတာကိုက ကျနော်တို့အမှားပါ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတရဲ့စကားဟာ နွားနို့သောက်ဖို့ နှိုးဆော်ခဲ့ဖူးတဲ့စကားလိုပါပဲ ပြောပြီး ပြီး သွား တဲ့သဘော။ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းစဉ် ဘာမှမရှိတဲ့သဘောဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံဆီ ရောက်ပြီးမှ သိ လိုက်ရပါတယ်။
သံရုံးမှာ ဗီဇာ သွားလျှောက်ကတည်းက ကိုယ်ရေးအချက်လက်မှန်အားလုံးကို အသေးစိပ်တင်ပြထား ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ကျနော့်ရွာဆီရောက်တဲ့အခါ နယ်မြေခံရဲနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးက နော်ဝေးနိုင်ငံသား မှတ်ပုံ တင်နံပတ်တွေ၊ ဗီဇာနံပတ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးနောက်ခံအချက်လက်တွေ လာမေးပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့ နယ် လ၀က ရုံးဆီသွားပြီး နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ဧည့်စာရင်းတိုင်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီဧည့်စာရင်းတင်းကျပ်မှုတွေထဲမှာ ''၁၉၄၈ ခု နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေးစည်းကမ်းဥပဒေ များ''၊ ရပ်ကွက်အတွင်း တည်းခိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်စာရင်း။ ရပ်ကွက် နေအိမ်၊ အဆောက်ဦများတွင် တည်းခိုနေထိုင်သည့် နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အိမ်ရှင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ။ အိမ်ထောင် စု လူဦးရေစာရင်း။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေမှုးရဲ့ ထောက်ခံစာ ဆိုတာတွေပါရှိပါတယ်။
ဒါတွေကို ကျနော်လက်မခံနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာပြည်ကိုတခါမှမရောက်ဖူးလို့ အလည်လာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေမဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်နေဖို့ ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ပြန်လာသူတွေသာဖြစ်ပါ တယ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုပုံနဲ့တော့ ရွာမှာရေရှည်နေဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ ဒါဟာ ကျနော်တဦးတည်းကြုံရတဲ့ ကျနော်တို့ဒေသက အာဏာပိုင်တွေရဲ့ တမင်ညစ်မှုလားလို့တော့ သံသယ၀င်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တ ခြားနယ်အတော်များများက ပြည်တော်ပြန်တွေလဲ ကျနော်လိုပဲ ကြုံရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ခက်တာက ဒီကိစ္စတွေကိုလူသိရှင်ကြားပြန်ပြောရင် ကျေးလက်ဒေသက သူတို့မိသားစုတွေ ထိ ခိုက်မှာစိုးလို့ ပြန်မပြောရဲတာလို့ဆိုကြပါတယ်။
အင်း...အစိုးရကို ပြန်မပြောရဲတဲ့သူတွေထဲမှာ ပြန်တော်ပြန်တွေပါ ပါနေပြီလား။ ထားတော့။ ကျေးလက် ကကိစ္စဆိုတော့ လူတွေသိပ်မသိကြပါ။ ရန်ကုန်မှာကော အခြေနေဘယ်လိုလဲ။ လောလောဆယ် လူ ပြောများနေတဲ့ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ခွင့်နဲ့ နိုင်ငံသား ပြန် လျှောက်ထားမှုအခြေနေကိုကြည့်ရင် ပြည်တော်ပြန်တွေရဲ့အခြေမှန်ကို ပိုပြီးသဘောပေါက်လွယ် မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားစာအုပ်ကိုလွှင့်ပစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြန်လျှောက်ထားတာ တနှစ်နီးပါးကြာ တဲ့အထိ အစိုးရဖက်က ဘာမှအကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ အခုတော့ ယာယီနေ ထိုင်ခွင့် တောင် မပေးတော့ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ထွက်ပြီး ဗီဇာ ပြန်လျှောက်ဖို့၊ အဲဒီကနေ နိုင်ငံသားပြန် လျှောက် ဖို့ အစိုးရက သတိပေးလိုက်တယ်လို့ သတင်းတွေထဲဖတ်ရပါတယ်။
(အခုနောက်ဆုံးသတင်းတွေအရတော့ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ကိုမိုးဟိန်းတို့ကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက BlackList ကြေငြာလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ Facebook မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထား တာကို ဒီနေ့ ၁၁-၆-၁၄ မှာတွေ့ရပါတယ်)
ဒီကိစ္စတွေကိုကိုင်တွယ်တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးခင်ရီရဲ့ စကားကို ကိုးကားရမယ်ဆိုရင် “နိုင်ငံသားပြန်လျှောက်သူတွေကို ဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုကနေပြီးတော့ ပြန် လည်စစ်ဆေးပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးတာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီကို တင်ပါတယ်။ တင်တာကို သမ္မတက နေ ပြန်လက်ခံဖို့ ချပေးပါတယ်။ ချပေးတာနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ သူလုပ်ကိုင်ရမယ့် အဆင့်တွေ ထပ်လုပ်ရ မှာတွေ ရှိပါတယ်” လို့ မေလ ၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုအတွင်း ဦး ခင်ရီကပြောသွားပါတယ်။
ဦးခင်ရီရဲ့စကားကို စာဖတ်သူတွေ ဘယ်လိုသဘောပေါက်သလဲတော့ မသိပါ။ ပြည်တော်ပြန်တဦးဖြစ် တဲ့ ကျနော်ကတော့ နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြန်လက်ခံခြင်းဟာ လုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေ၊ ဥပဒေတွေထက် သမ္မ တနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကလက်ခံမှ၊ ပိုရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့အစိုးရကကြိုက်တဲ့လူမှ၊ သူတို့ အစိုးရကို ဖားတဲ့လူကိုမှ ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ လေသံမျိုးထွက်နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
သမ္မတအကြံပေးအဖြစ် လစားတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေ၊ MPC ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ လခစားဝင်လုပ်နေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေအားလုံးဟာ တချိန်က ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ကိုမိုးသီးဇွန်ရဲ့ အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးသူတွေပါ။ အဲဒီလူတွေကိုကျတော့ ချက်ချင်းနိုင်ငံသားထုတ်ပေးတာ၊ ချက် ချင်းမထုတ်ပေးနိုင်ရင်တောင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရေရှည်နေထိုင်ခွင့်ရအောင် အစိုးရအာဏာကို သုံး ပြိး တနည်းနည်းနဲ့လုပ်ပေးထားနိုင်ပေမဲ့ ကိုမိုးသီးဇွန်ကျမှ ဘာလို့လုပ်မပေးနိုင်တာလဲ။ အစိုးရလခစား ၀င်မလုပ်ပဲ အစိုးရကို ဝေဖန်နေလို့လားဆိုတာဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်။
ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ကိုမိုးသီးဇွန်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင် ဒီလိုညစ်ထားတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့လို သာ မန် တပ်ဝင်ဟောင်းတွေဆို ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကျနော်ဟာ ကိုမိုးသီးဇွန်လို လက် ရှိကိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစာအုပ်ကိုလွှင့်ပစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လျှောက်ဖို့အထိ သတ္တိမရှိသေးပါ။ အာမခံချက်ရှိတဲ့ သေချာတဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်မဖြစ်မချင်း၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲအလွန် အရပ်သားစစ်စစ်အစိုးသစ်ကာလအထိ လက်ရှိနိုင်ငံခြားသားစာအုပ်ကိုကိုင်ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မီဒီယာအလုပ် လုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားသူပါ။
ရှေ့မှာညွှန်းခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးဦးခင်ရီကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ခန့်ကပြောခဲ့ဖူးတဲ့ PR အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့်ဆို တာကို စိတ်ကူးယဉ်စောင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအစီစဉ်ကလဲ သမ္မတရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်လိုပဲ အသံသာရှိပြီး အဆံမရှိတဲ့ စကားလုံးသက်သက်များဖြစ်နေလေမလားလို့တော့ သံသယ၀င်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲဒီ PR ဥပဒေထုတ်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ဆီတင်ထားပါတယ်လို့ပြောသံကြားပြီး တနှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ဘာလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်မလာသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်တဦးတည်းအမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပြည်ပရောက်သွားသူတွေ ထဲက ယုံကြည်ချက်ကိုအတိမ်းအစောင်းခံပြီး အစိုးရလခစားအဖြစ်ပြန်လုပ်မဲ့သူ ဆယ်ဂဏန်းထက် မကျော်နိုင်ပါ။ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီး အာဏာအသိုင်းဝိုင်းထဲပြန်ဝင်မဲ့လူလဲ ရာဂဏန်းဝန်းကျင်သာ ရှိ မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တကယ့်လူအများစုဟာ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ကိုယ့် ရပ်ကိုယ့်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ပြန်လည်အလုပ်အကျွေးပြုချင်သူတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အတတ်ပညာနဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့အထဲမှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရမှ၊ မာစတာဘွဲ့ရမှ မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားပြင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးထိမ်းကျောင်းအကူလုပ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးဆိုင် ရောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆူရှီသမားပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာတာဝန်ထမ်းဖူးသူဟာ စနစ်တကျတတ်မြောက် ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေရဲ့ အတတ်ပညာနဲ့ အတွေ့အကြုံကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်အသုံးချခွင့် ပေးခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်အခြေခံအဆောက်ဦ တိုးတက်ရေးအတွက် တစုံတရာအကျိုး ရှိစေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီလိုအလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ပြန်လာချင်သူတွေကို အစိုးရက ဘာကြောင့်တားဆီးပိတ်ပင်ချင်နေရတာလဲ။ တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရဖက်က ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလဲဆိုတာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အဖွဲ့ အသေချာလေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု Political Reform မလုပ်ခင် အာဏာပြမှုများအားဖြေလျှော့ခြင်း Liberate အဆင့်မှာကတည်းက လုပ်ပေးရမဲ့ အချက်တခုဖြစ်တယ်လို့လဲ မြင်မိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်။ ။
June 11, 2014 at 7:57 AM Reply
ဒီနေ့ (၁၁-၆-၁၄) ၀င်လာတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းအရ PR ကိစ္စကို လာမဲ့ ၄ လအတွင်း (လာမဲ့ အောင်တိုလာလအတွင်း) လုပ်ပေးတော့မယ်လို့ ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကပြောတယ်လို့ဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်...။ ဒါပေမယ့် ပြည်တော်ပြန်တွေကို နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ထား ထားတဲ့ပုံပါပဲ....
By MAY KHA/ THE IRRAWADDY| Wednesday, June 11, 2014 |
Share on facebook Share on twitter Share on blogger
Minister of Immigration Khin Yi givesapress conference at the Rangoon Division Parliament building in May. (Photo: May Kha / The Irrawaddy)
NAYPYIDAW — A permanent residency (PR) system for foreign nationals will be implemented by October of this year, Burma’s immigration chief said last week.
June 12, 2014 at 6:33 PM Reply
Thanks Ko Thet Aung Kyaw for the clarification wrt the PR status of the Burmese Diaspora. I do not know of others, but on my first return to Myanmar after 22 years. Though I was issuedaentry visa, cleared by THe Ministry of Home Affairs and issued by The myanmar Embassey , Canberra , Australia at Yangon airport, I was told by the Head, Immigration Officer there that I was still on the "list". He said that I would have to board back the plane I landed in Myanmar. My nephew andagood family friend explained their best. After all the hassle, the Officer phone the Inteeligence Dept, I was allowed entry. I was very shaken up, my blood pressure rose greatly. The young women immigration officers and most of all U Sein Thein , he being the next senior officer were very courteous and kind toaold Burmese returnee. I amaBurmese, proud to beaBurmese, . No state or government can take my dignity and loyalty to my country, away from me. BeingaBurmese alwaysaBurmese. Myo Nyunt. Perth, Western Australiia.
ဆယ်သိန်းပေးမဲ့ မီဒီယာသင်တန်းကို စိတ်ဝင်စားကြသလား။
တော်လှန်ရေး သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်း ၁၆)
နေ့တာအရှည်ဆုံးနေ့မှာ သန်းခေါင်ယံနေ ဆီ ခရီးသွားခြင်း
တော်လှန်ရေး သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်း ၁၅)
မိုးသီးဇွန်၊ ပီနန်ဆရာတော်နှင့် တကိုယ်စာ ရှင်သန်နေထ...
တော်လှန်ရေး သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်း ၁၄)
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၅၁
‘‘တခု တကောင် တယောက်’’ စာပေစကားဝိုင်း
တော်လှန်ရေး သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်း ၁၃)
ထားဝယ် လယ်သမား၂၀ ဦး ကို သက်ဆိုင်ရာက အမှုဖွင့်
တနသာင်္ရီ ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၅၀။
ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူး အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား ဇာတိရွာတွ...